Nhau - Arenti akahwina iyo IF DESIGN AWARD 2021
Hoofddorp, Kubvumbi 13, 2021 - Arenti akahwina yegore rino iF DESIGN AWARD, iyo inozivikanwa pasi rese mubairo. Chigadzirwa chinokunda, Arenti Optics Smart Home Security Series, yakahwina mukuranga kwechigadzirwa, mune yekuchengetedza kamera uye chikamu chemusuwo. Gore rega rega, iro repasirese rakazvimirira dhizaini dhizaini, Hannover-yakavakirwa iF International Foramu Dhizaini GmbH, inoronga iyo IF DESIGN AWARD.
Arenti Optics Smart Home Security Series yakakunda pamusoro pe 98-nhengo yedare redzimhosva, rakagadzirwa nenyanzvi dzakazvimirira kubva pasirese, neAluminium-Yakagadzirwa Dhizaini, 2K Ultra HD Resolution uye Artificial Intelligence Powered Zvimiro. Makwikwi acho aive akakura: angangoita zviuru gumi zvakatumirwa kubva kunyika makumi mashanu nemaviri netariro yekugamuchira chisimbiso chemhando.
Mamwe mashoko nezve Arenti Optics Smart Home Security Series anogona kuwanikwa mu "Vanokunda" chikamu che IFF YEMAHARA DZIDZISO YENYIKA.
Arenti ndeye DIY Smart Home Security System brand naArenti Technology, yakanangana nekupa vashandisi vepasirese zviri nyore, zvakachengeteka uye zvine hungwaru zvigadzirwa zvekuchengetedza pamba & mhinduro pamwe nemubatanidzwa wakakwana wekucheka-kumucheto dhizaini, mitengo inodhura, matekinoroji epamberi & mushandisi-anoshamwaridzika mabasa.
Arenti smart zvigadzirwa zvemumba zvinounza zvakanyanya mukuita, mukurumari, kuita kwakawanda uye kukosha. Zvese zvigadzirwa zviri 100% zvakagadzirwa neyayo R & D timu ine 100+ mainjiniya kunyanya kubva epamusoro epasi matatu ekuchengetedza mapoka, akagadzirwa nekutungamira yeItaly dhizaini boka iro zvakare rinoita magadzirirwo eBraun, Panasonic, uye inogadzirwa neyayo yega yekugadzira nzvimbo ine vanopfuura 500 vashandi vese mu iyo Netherlands nePRC.
IEurope hofisi yakagadzwa muAmsterdam & hofisi yeUS ichivambwa muCalifornia, Arenti yakazvishandura kuita imwe yepamusoro gumi smart kamera vatengesi vepasirese pasi pese nemamirioni matatu pcs smart kamera dzakatengeswa mu2019, 4.5 mamirioni zvidimbu zvakatengeswa muna2020. akangwara epamba makamera anosanganisira ekupinda-chikamu chemukati makamera uye epamusoro-magumo mabhatiri-anofambisa makamera, vhidhiyo masuo esimbi & mafashama emagetsi kamera, uye zvigadzirwa zvaro zvinoenderana neA Alexa, Google Mubatsiri nemamwe mapuratifomu.
Nezve iyo IF Dhizaini Mubayiro
Kwemakore makumi matanhatu nenomwe, iyo IF DESIGN AWARD yakagamuchirwa seye arbiter yemhando yeakasarudzika dhizaini. Iyo iF label inozivikanwa pasi rese nekuda kweanoshamisa dhizaini masevhisi, uye iyo IF DESIGN AWARD ndeimwe yemakoshesesa ekugadzira mibairo pasirese. Kutumira kunopihwa mune anotevera ekuraira: Chigadzirwa, Kuteedzera, Kutaurirana uye Kubata Dhizaini, Dhizaini uye Yemukati Yekuvaka pamwe neProfessional Concept Mushandisi Chiitiko (UX) uye Mushandisi Wekushandisa (UI). Zvese zvakapihwa zvinyorwa zvinoratidzwa pane iyoIFF YEMAHARA DZIDZISO YENYIKA uye mu iF dhizaini yekushandisa.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota nyorera:
Sravana Sameeralu Serial 4th Arenti Technology
Post nguva: 13/04/21